Macluumaadka Shirkadda - Shenzhen OTAO Technology Co., Ltd.
OTAO, ilaa 2015, waxay si isdaba joog ah ugu adeegtay in ka badan 7000 oo macaamiil ah, oo ay ku jiraan 300 + noocyada adduunka oo idil.
Maaddaama aan ahay mid ka mid ah soo saarayaasha hormuudka ka ah ilaaliyeyaasha shaashadda, oo ku takhasusay bixinta xalka hal-joog ee cilmi-baarista, horumarinta, naqshadeynta, miisaaniyadda iyo soo-saarista ilaaliyeyaasha shaashadda ee taleefannada gacanta, muraayadaha gacanta, kiniiniyada,PC, Saacadaha, Kaamerooyinka, GPS, Gawaarida, Qalabka Guryaha iyo Mashiinnada Warshadaha ...
Si loo bixiyo adeeg wanaagsan oo loogu talagalay macaamiisha, OTAO waxay aasaasey xarun xirfadlayaal heer sare ah R&D galaas iyo saldhig wax soo saar, 12000m2, ISO / SGS / TUV shahaado la siiyey.
Si kal iyo laab ah u soo dhawow wada shaqeyntaada OEM / ODM ee aad nagalaheysid tikniyoolajiyad cusub muraayad qabow.
"Samee mid sax ah, Fududee, ka dhig mid ka duwan!"
Shirkadda Koowaad waxay ku guuleysatay shahaadada TUV qaybta ilaalinta shaashadda.
Shirkadii ugu horreysay waxay soo saartay tikniyoolajiyadda qalooca 3D ee qeybta ilaaliyaha shaashadda.
Iibiyaha hadiyadda ee iibiyaasha Mercedes-Benz, qeybiyeyaasha raaxada.
Alaab-qeybiyeha shirkadaha isgaarsiinta ee Ameerika iyo Euro.
Alaab-qeybiyaha noocyada ilaaliyaha shaashadda caanka ah ee Mareykanka iyo Yurub.
Iibiyaha Amazon 5 Star
"Koraaya | Wadaagista | Abuuritaanka | Kordhinta"
"Furitaan | Xamaasad | Farxad | Mas'uuliyad"
Waxyaabaha muhiimka u ah horumarka OTAO
Laga soo bilaabo 2005, OTAO waxay si isdaba joog ah ugu dadaalaysaa una horumarinaysaa hal-abuurnimada wax soo saarka, horumarinta kooxda, adeegga macaamiisha iyo waxqabadka bulshada.
Waxay la shaqeysay shirkadda Japan iyo Kuuriya si R&D loo helo qalab cusub oo ah ilaaliyayaasha shaashadda
Ballaarinta khadadka wax soosaarka oo soo iibsaday mashiinno badan oo CNC ah, mashiinno tijaabo ah si loo xakameeyo tayada Mashiinka la gelinayo muraayadda otomaatiga ah ee loo yaqaan 'UV glass auto auto installing; Deji kooxda iibka B2C oo diiwaangeli iibiyaha qiimaha weyn ee Amazon
Waxaan maalgashanay oo aan helnay xarun warshad cusub oo 12000 m2 ah iyo 2 xarumaha R&D ee magaalada Fenggang, Magaalada Dongguan, si aan u balaarino cabirka wax soosaarka iyo hagaajinta tikniyoolajiyadeena iyo farsamadeena. OTAO waxay u heellan tahay inay bixiso alaab tayo sare leh.
Waxay u heelan tahay 3D dabool buuxa oo leh muraayad qaboojiyaha AB buuxa leh iyo 2x ilaaliyaha 3D muraayadda muraayadda leh
2016 Hal-abuurnimo ka xoog badan 2x galaas cadho adag leh iyo ilaaliyaha shaashadda muraayadda oo leh tiknoolajiyad silikoon ah ayaa la bilaabay.
Ahaanshaha mid ka mid ah soosaarayaasha ugu horeeya bilawgii 3D wax soosaarka cufan ee muraayadda kulul In ka badan malaayiin cutub oo 3D ilaaliyayaal shaashad muraayad qafiif ah ayaa la iibiyay.
Soosaaray 3D galaas qafiif ah. Waxaa lagu maalgeliyey $ 1 milyan oo doolar R&D iyo khadadka wax soo saarka
OTAO waxay diirada saareysaa soosaarida ilaaliyeyaasha shaashadda muraayadda
Nooca OTAO ee diiwaangashan, magaca Shenzhen OTAO Technology Co.Ltd
waxay bixiyaan adeegyo dhowr ah oo ah qalabka taleefanka gacanta ee OEM oo loogu talagalay shirkadaha caanka ah ee caanka ah.
Fulljion Digital Technology co., Ltd. waxaa la aasaasay oo lagu qeexay inuu yahay aaladda qalabka telefoonka.
ISO14001: 2015 ISO9001: 2015 OHSAS18001: 2007 SGS ROSH SGS REACH TUV Shahaadada
ALIBABA alaab-qeybiyaha la qiimeeyay ee Globalsource ayaa qiimeeyay alaab-qeybiye
Xirfadaha Kordhinta Xirfadaha
Ujeeddadu inay tahay inaad siiso alaabada wanaagsan, adeegga, waaya-aragnimada lamaaneheenna iyo macaamiisha adduunka oo idil.